လေနုအေး: Midlife Crisis နဲ့ဘ၀လက်တွဲဖော်
း) မှန်လိုက်လေ အစ်မရယ်
ဟုတ်တယ် ... အသိတွေထဲမှာကို သတင်းတွေ ကြားနေရတယ် တန်ခူးရေ။ ကျောင်းတုံးက ခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကွန်ဒိုဝယ်ပြီး အငယ်လေးနဲ့ပဲနေတယ်ဆိုတာတွေလဲကြားရဲ့။ အံ့သြတကြီးဖြစ်ရပါတယ်။ တန်ခူးရဲ့စာလေးဖတ်ပြီး အမြင်မှန်ရကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ....
နောက်ဆုံးအရင်းစစ်လိုက်ရင်တော့ ကိုယ်ရဲ့ စိတ်ပါပဲ အမရယ်။
စိတ်အလိုကို လိုက်မိကြလို့ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာနေမှာနော်။
ကိုယ့်စိတ်ကပဲ ကိုယ့်ဘ၀ကို ပြန်ဖျက်နေတာပဲ။
ဖောက်ပြန်တဲ့သူတိုင်းမှာ အကြောင်းပြချက်တွေကလဲ အသင့်ရှိနေတတ်ကြတယ်။
ဒီနိုင်ငံတွေမှာ အဲဒီလိုကိစ္စတွေက မဆန်းသလို ဖြစ်နေပေမဲ့ အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေ ကြင်ကြင်နာနာ တယောက်ကိုတယောက် ဖေးမပြီး သွားလာနေကြတာ မြင်ရင် သိပ်ကြည်နူးတာပဲ။
လက်တွဲဖော် ပါရမီဖြည့်ဘက်ဆိုတာ ဒီဘ၀အတွက်တွင် မဟုတ်ဖူးနော် ... ဘ၀အဆက်ဆက် သံသရာအဆက်ဆက် ... နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းပေါ့။
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်က နကုလမာတာနဲ့ နကုလပိတာတို့ ဇနီးမောင်နှံကိုတော့ အားကျတယ် အမရေ ... ။ :)
လူကြီးတွေကြောင့် လောကထဲ မအူမလည် ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေ လူကြီးတွေကြောင့်ပဲ သိမ်သိမ်ငယ်ငယ် ဖြစ်သွားရတဲ့ကလေးတွေ သူတို့တွေကိုပဲ သနားပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးမှာတင် မဟုတ်၊ ဘယ်နေရာမဆို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မျှမျှတတ ဖြစ်ပါမှ..။ တဦးတယောက်က အလွန်အကျွံဆိုရင် balance out သွားတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါကလဲ ကိုယ်တယောက်တည်း လုပ်လို့ရတဲ့အရာ မဟုတ်သေးဘူး။ နှစ်ဘက်စလုံး ညီဖို့ လိုသေးတယ်။ ဒီ midlife ရောက်လို့ တည်ငြိမ်သင့်တဲ့အချိန် ရောက်တာတောင်မှ ကိုယ့်ဘ၀၊ ကိုယ့်မိသားစုဘ၀လေးကို balance မလုပ်နိုင်ရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူး လို့ ထင်မိတယ်။ ဒီစာဖတ်ရင်း တွေးမိတာတွေပါ ချစ်တဲ့အမရေ..၊ ဘ၀တွေ အဆင်ပြေကြပါစေ။
I love reading this post which makes me thinking about some of my acquaintance. Thank you and please let me add your blog in my blogroll.
Midlife crisis ဆိုတာအသက်ကြီးမှ ferrari ဝယ်စီးချင်တာမှတ်လို့
စိတ်ပျက်စရာ အမရေ .. ပိုက်ဆံရှိလာရင် ပိုဆိုးလာသလိုပဲ .. အဓိက ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ်နဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ် ..
မရေ.. တီရှပ်ပန်းချီနဲ့ idea လေးကို သဘောကျလိုက်တာ.. မိသားစုဘ၀လေးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ပုံဖော်ထားလို့ အမရေးထားတဲ့ စာကို ဖတ်ရင်း ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရတာ ကြည့်မ၀ဘူးရယ်.. :)
ဒီ article လေး နဲ့ တွဲထားချင်လို့ပါ တန်ခူးရေ